Su'aalaha CBD - Isku day xasilloonida CBD
Weydii Away iyo haddii aad leedahay a su'aal taas halkan laguma jawaabo, si xor ah noola soo xiriir
256-302-9824 ama email noogu soo dir service@trytranquil.net.
CBD waa qayb si dabiici ah u dhacda geedka hemp. Waa phytocannabinoid aan sakhraaminayn oo bixisa adeegyo badan oo jirka oo dhan ah. CBD waa mid ka mid ah daraasiin phytocannabinoids iyo phytochemicals kale oo laga helo hemp.
Saliida CBD waxaa laga soo qaatay dhirta hemp ee leh heerar sare oo ah cannabidiol (CBD) iyo heerar hoose oo ah THC. Tranquil CBD waxay soo saartaa qaar ka mid ah suuqyada ugu fiican ee saliida CBD, oo laga soo saaro dhir caafimaad leh, dhir dherer badan oo CBD-ku leh oo ku koray halkan Maraykanka.
Sidee loo soosaaraa saliideena CBD?
Xuubkeennu waa Isbahaysiga Cuntada oo la caddeeyey, koray oo laga goostay beeraheenna ku yaal Alabama & Kentucky. Beeraha Tranquil, waxaan u isticmaalnaa soo saarista cryo ethanol si aan u soo saarno ceyriin si buuxda u qabow oo loo yaqaan 'decarboxylated crude', taas oo si cusub loogu sameeyay iskudhafka buuxa iyada oo loo marayo habab kala-soocid horseed ah (ie spd & wfd).
Saynis ahaan, hemp warshadaha iyo marijuana waa isku geed, oo leh genus iyo magac nooc Cannabis sativa. Waxay leeyihiin muuqaal hidde ah oo gaar ah, si kastaba ha noqotee. Caadi ahaan, hemp warshadaha waa mid aad u jilicsan oo leh jirrid dheer oo xoog leh iyo in yar oo ubbooyinkeeda ah. Dhirta Marijuana sida caadiga ah way ka yar yihiin, wey badan yihiin, oo waxaa ka buuxa burooyin ubax ah. Si kastaba ha noqotee, noocyada cusub ee hemp warshadaha ee Maraykanka ayaa loo qoondeeyay inay yeeshaan ubaxyo badan iyo waxsoosaar sare oo ah cannabinoids iyo terpenes, sida Kentucky hemp aan hadda isticmaalno. Inta badan, marijuana waxay leedahay qadar sare oo ah THC iyo qadar aad u yar oo CBD ah. Hemp, dhinaca kale, dabiici ahaan wuxuu leeyahay xaddi sare oo CBD ah (xaaladaha badankood) oo kaliya wuxuu raadraacaa qaddar THC ah. Nasiib wanaagse, astaanta 'cannabinoid' ee hemp waxay ku habboon tahay dadka raadinaya faa'iidooyinka xashiishadda iyada oo aan 'sare' lahayn. Taariikh ahaan, hemp waxaa loo isticmaalay in lagu sameeyo alaabada cuntada, fiber, xarig, warqad, leben, saliid, caag dabiici ah, iyo waxyaabo kaloo aad u badan. Mareykanka gudaheeda, marijuana waxaa badanaa loo isticmaalaa madadaalo ahaan iyo daawo ahaanba. Ereyga "saliida xashiishadda" waxaa loola jeedaa marijuana ama saliid hemp laga soo saaray, maadaama marijuana iyo hemp ay yihiin laba nooc oo xashiishad kala duwan ah. Dhammaan saliidaha Tranquil CBD waxaa laga soo saaray hemp.
Saliida CBD sharci ma tahay?
CBD laga soo qaado hemp ayaa si ballaaran looga heli karaa Maraykanka oo dhan. Sannadka 2018, cusbooneysiinta Sharciga Beeraha Mareykanka wuxuu sharciyeeyay beero-ganacsiyeedka hemp xeerarka qaarkood. Waxyaalaha dagan ee CBD waxaa laga keenaa heersare sare oo Mareykan ah oo koraysa, waana wadarta wadarta guud ee T. Waxaan si sharaf leh u bixinaa maraakiibta bilaashka ah, qiimo dhimista halyeeyada, iyo xulashooyinka wax iibsiga jumlada badan ee dhammaan alaabteenna.
Sideen u keydsadaa CBD-da? Waa maxay nolosha shelf?
ama nolosha ugu fiican, sheygaaga Deganaanta waa in lagu keydiyaa qoyaan yar, qabow, mugdi ah kana fog qorraxda tooska ah. Tani waxay gacan ka geysan doontaa sidii loo ilaalin lahaa waxyaabaha ka soo baxa hemp-ka. Haddii CBD si habboon loo kaydiyo waxay yeelan kartaa ilaa 1 sano oo nolol ah.
Miyaan ku dhici doonaa baaritaanka daroogada haddii aan qaato waxyaabaha CBD?
Saliida Tranquil CBD waxaa laga keenaa hemp warshadaha USA-koray, waxaana ku jiri kara raadad THC heerar ka hooseeya 0.3%. Tranquil CBD ma damaanad qaadayso inaad dhaafi doontid ama dhaafi doontid shaashadda daawada kadib markaad cunto alaabtayada. Waa suurta gal in raad raaca THC laga yaabo inuu ka muuqdo baaritaanka daroogada ee kala duwan.
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee isticmaalka?
Waxyaabaha Tranquil CBD waxaa lagu heli karaa noocyo kala duwan. Waxaan ku siinaa saliidaha CBD kuwaas oo fudud, saafi ah, oo waxtar leh, oo la cuno iyadoo la dhigayo dhibco hoosta carrabka. Waxaan bixinaa wax soo saar duuban, oo bixiya fowdo-la'aan, codsi ku habboon oo si fiican u shaqeeya socodka isla markaana kuu oggolaanaya inaad si sax ah u tilmaamto halka aad rabto inaad bartilmaameedsato faa'iidooyinka muddada-dheer. Waxaan sidoo kale bixinaa kareem la mariyo, oo saliid lagu shubo, ku habboon, oo muddo dheer soconaya, iyadoo la siinayo faa'iidooyin caafimaad oo kala duwan. Fadlan fiiri boggayaga iyo bogagga wax soo saarka ee kala duwan si aad u go'aamiso badeecada kuugu habboon adiga iyo baahiyahaaga.
Sare ma kici doonaa?
Maya. Dhammaan alaabadayada laga soosaaray hemp-ka waxaa laga sameeyaa hemp warshadaha leh Heerarka THC ka hooseeya 0.3%. Ma jiraan wax saameyn ah oo sarkhaansan oo ka yimaada qaadashada alaabtayada.
Waa maxay siyaasada maraakiibta ee Tranquil CBD?
Maraakiibta Mareykanka ee Gudaha waa $ 7.99 dalabkiiba waxaana lagu geyn doonaa iyada oo loo marayo FedEx iyadoo la adeegsanayo 48 saac oo rar ah. Waqtigeena maaraynta waa 2 maalmood oo shaqo. Fadlan, u oggolow 4 maalmood oo shaqo si aad u hesho amarkaaga. Uma rarno Idaho, Montana, ama South Dakota.
Maraakiibta Caalamiga ahi waa $ 25.00 dalabkiiba. Gaarsiinta guud ahaan waxay qaadataa inta u dhexeysa 7-21 maalmood si ay u yimaadaan. Taariikhaha dirista la ballanqaaday ama waqtiyada lama heli karo Maraakiibta Caalamiga ah.
Muddo intee le'eg ayay qaadan doontaa in la helo alaabtayda?
Waxaad caadi ahaan ku heli doontaa badeecadaada 3 illaa 4 maalmood oo shaqo gudahood amarada Mareykanka Gudaha. Amarada caalamiga ahi guud ahaan waxay qaataan 7-21 maalmood laakiin lama dammaanad qaadi karo.
Dhammaan iibka laga iibsado degelkani waa DHAMMAAD. Soo celinta, ama Codsiga Soo Celinta waa la diidi doonaa.
Gobollada aynaan u rarneyn Mareykanka
Shuruucda federaalka Mareykanka awgood, waxaan u rarnaa alaabada CBD dhammaan gobollada Mareykanka marka laga reebo Idaho, Wyoming iyo South Dakota. Uma rarno goboladaas.